सिड्नीमा ‘शो’ बढाउँदै बुलबुल – Nepali Digital Newspaper
पछिल्लोपटक नेपाली सिनेमाले राम्रो बजार पाएको मूलुकमा पर्छ अष्ट्रेलिया । त्यसमाथि पनि अष्ट्रेलियाको सिड्नी त नेपाली सिनेमाको लागि बलियो बजारका रूपमा स्थापित भइसकेको छ । तर, यसो भन्दैमा सबै नेपाली सिनेमाको बजार र उचाई भने सिड्नीमा ‘वाह्’ गर्नलायकको छैन ।
नेपालमा नाम र दाम हात पारेका र मन पराइएका सिनेमाहरूले मात्र अष्ट्रेलियामा मन जितिरहेको सत्यता पनि लुकेको छैन । अष्ट्रेलियामा फिल्म चलाउने भनेर नामका लागि मात्र सिनेमा चलाउँदा दर्शकको उपस्थिति नभइदिँदा कति सिनेमाको ‘शो’ नै क्यान्सिल भएको उदाहरणहरू पनि प्रशस्त छन् यहाँ । सिड्नीमा नै हो, शत्रु गते, दुई रूपैयाँ, लुट, छक्का–पन्जा, प्रसाद, इन्टु मिन्टु लन्डनमा लगायतका केही सिनेमाहरूले गजबको ब्यापार गरेका थिए भने यहीँ नै केही सिनेमाहरूको शो क्यान्सिल भएको र एक शोमा मात्र चलचित्रहरूको प्रदर्शनी सीमित रहेको सत्यता पनि कतैबाट लुकेको छैन ।
अष्ट्रेलियामा चल्ने र बजार पाउने सिनेमाहरूले पहिले नै छनक देखाउने गरेका छन् । चलचित्रको लोकप्रियता र चर्चामा आएका चलचित्रका बारेमा अष्ट्रेलियावासी नेपालीहरू जानकार हुने भएकाले अब यहाँ रहेका दर्शकलाई खराब र नेपालमा खासै नाम नचलेका सिनेमा ल्याएर देखाउनुको अर्थ नै छैन ।
नेपालमा कुन सिनेमा चल्यो ? कुन सिनेमाले कस्तो ब्यापार गऱ्यो ? भन्ने कुराको बारेमा अष्ट्रेलियामा फिल्म लेराउने वितरक भन्दा अष्ट्रेलियामा रहेका नेपाली चलचित्रप्रेमी दर्शकहरू नै विज्ञ भइसकेका छन् । पछिल्लोपटक सिड्नीमा धेरै सिनेमाको असफलता र थोरै सिनेमाको सफलताले यो कुराहरुको पुष्टि गरिसकेको छ ।
यसैबीच, नेपालमा प्रशंसैप्रशंसा हात पारेपछि अष्ट्रेलिया भित्रिएको चलचित्र बुलबुल सिड्नीमा पनि आफ्नो साख जोगाउँदै प्रदर्शनको यात्रामा अगाडि बढेको छ । सिड्नीको हर्सभिल र बरउडमा हाउसफूलका साथ दुई ‘शो’ भैसकेको यो चलचित्रको सिड्नीको बरूउडमा रहेको इभेन्ट सिनेमामा बुधबार तेस्रो ‘शो’ हुने भएको छ ।
‘दर्शकहरूको उच्च मागलाई ध्यानमा राखेर थप शो गरिएको हो । अन्य शो पनि थपिने सङ्केत देखापरेको छ’, बुलबुललाई सिड्नी भित्र्याउने मनोज अधिकारी र गगन बिँडारीको भनाई थियो । परेर र रहरले नभई पढेर चलचित्र कर्ममा फाल हालेको समूहले बनाएको चलचित्र बुलबुलको यतिबेला अष्ट्रेलियामा रहेका दर्शकहरूले खुलेर तारिफ गरेका छन् ।